Nyamavhuvhu 13, 2018 arun
Bitcoin kutonga zvazvingava kwakafanorongwa 50% kokutanga muupenyu 2018
Bitcoin zvino inoumba 50 muzana rose cryptocurrency musika capitalization. On August 11th, CoinMarketCap raMwari Bitcoin kutonga zvazvingava - nechiidzo kuti inocherechedza muzana zvachose cryptocurrency musika capitalization vakabatsirawo anotungamirira cryptocurrency - zvasvika 50 muzana kokutanga kubva December rechi19, 2017.
At womupepanhau nguva, Bitcoin kuti musika capitalization zvino zvinyorwa $105,785,552,545, riri pamusoro $901 kupfuura musika capitalization dzimwe cryptocurrency ose zvikabatanidzwa miriyoni. Bitcoin kwakaita kutonga zvazvingava rave riri vachiwana deva mumakore mishoma, Pari anomirira 14 muzana kuwedzera kubva May 1st. Panguva iyoyo nguva pamusika kutonga mamwe cryptocurrencies ose zvikuru kwave kupera.
Kraken Daily Market Mushumo 12.08.2018
$92.2M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Mumakore gore, an increas...